NKJUNG – Medianp
आइतबार, ०४, कार्तिक, २०७५
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर ०७, २०७४०७:२२
काठमाडौँ । सगरमाथाको उचाइ फागुनको पहिलो साताबाट नापिने निश्चित भएको छ ।त्यसका लागि यही मंसीर मसान्तसम्म आवश्यक पर्ने सबै प्रविधिको तयारी पूरा हुने नापी विभागले जनाएको छ । मंसीर २५ र २६ गते काठमाडौंमा सगरमाथा उचाइ
आज विवाह पञ्चमी, जनकपुरमा विवाह महोत्सव मनाइँदै
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर ०७, २०७४०७:१६
जनकपुरधाम ७ मंसिर । मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुरधाममा पौराणिक प्रचलनअनुसार आज भगवान् सीताराम विवाह महोत्सव मनाइँदै छ । जनकनन्दिनी सीताको विवाह भएको दिनको स्मरणमा मिथिलावासीले यस महोत्वलाई विशेष महोत्सवका रूपमा मनाउने गर्दछन् । महोत्सवका लागि अहिले यहाँ
मतदाताको लस्कर मजदुरी गर्न भारततर्फ
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर ०७, २०७४०६:४९
‘मतदान गर्न भनेर भोको बस्न भएन, पेट पाल्नका लागि भारत नगई अरू उपाय छैन’ – महाबु गाउँपालिका–६, रानीवन दैलेखका ५२ वर्षीय शेरबहादुर सिंह बुधबार नेपाल–भारत सीमानाका जमुनाह हुँदै भारत पसे । उनका साथमा ८ जना दैलेखी
NKJUNGप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर ०७, २०७४०६:३९
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले युरोपियन यूनियनका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छन् । कात्तिक अन्तिम साता जिल्ला आएको युनियनको तीन सदस्यीय टोलीले आचारसंहिताविपरित काम
मंसिर ७ गते राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर ०६, २०७४१९:४२
काठमाडौँ, ६ मंसिर । पहिलो चरणमा मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मंसिर ७ गते बिहीबार राति १२ बजेपछि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मौन अवधि शुरू भएपछि निर्वाचन सम्पन्न
बम राखेको अभियोगमा शिक्षक पक्राउ
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर ०६, २०७४१९:०१
नुवाकोट, ६ मंसिर । निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा लागेको अभियोगमा प्रहरीले शिवपुरी गाँउपालिका–.३ लिखु स्थित महेन्द्र माविका शिक्षक मधुसुदन पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । आज अपराह्न पक्राउ परेका पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट शिक्षक संगठनका जिल्ला नेता
हेलिकोप्टरमार्फत् निर्वाचन सामग्री
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर ०६, २०७४१७:४९
भक्तपुरमा उत्खनन् गर्दा भेटिए यस्तो सयौं वर्ष पुरानो संरचना
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर ०६, २०७४१७:१८
काठमाडौँ । भक्तपुरको जिल्लाको दरवार स्क्वायरमा रहेको श्रीपद्म उच्च माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा उत्खनन् गर्दा सयौं वर्ष पुरानो भग्नावशेष सहितको संरचना भेटिएको छ ।
विकास, समृद्धि तथा मधेशीको हक अधिकारका लागि वाम गठबन्धन
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर ०६, २०७४१७:१२
सप्तरी, ६ मंसिर । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य उमेश यादवले मधेसको विकास, समृद्धि तथा मधेशीको हक अधिकार पूरा गराउन वाम गठबन्धनलाई निर्वाचनमा विजय गराउनुपर्नेमा बताउनुभएको छ । आज राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले
सचिवसहित एमालेका कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश
NKJUNGप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर ०६, २०७४१७:०६
भोजपुर, ६ मंसिर । भोजपुरको साविक कोर्ट गाविसका एमाले सचिव केदार नेपालसहित १३ जना कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । ट्याम्के गाउँपालिकाको बुधबार भएको चुनावीसभामा एमालेका १३ जना कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई प्रनिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार
दीपिका र रणवीरले सार्वजनिक गरे विवाहको कार्ड
प्रियंका कार्की र आयुषमानकी आमाको तस्बिर भाइरल !
बलिउडका सबैभन्दा महंगा ६ आइटम गर्ल, कसले कति पारिश्रमिक लिन्छन् ?
के तपाइको पाचन प्रक्रियामा समस्या भइरहेको छ ? त्यसो भए यी ६ प्राकृतिक उपाय अपनाउनुहोस ।
तनहुँको आँबुखैरेनीमा बस दुर्घटना ३२ घाइते
७ तस्विरमा हेर्नुहोस महानायक राजेश हमाल र मधु भट्टराईको दशैँ!
डिसिएको क्रिकेट टोली मुम्बइ प्रस्थान
बलिउडका यी ७ नायिकाहरु दिदी-बहिनि हुन्!
मोरङको पथरीशनिश्चरेमा बस पल्टिँदा ३६ यात्रु घाइते
इन्द्र सरोवर : बिजुली र पर्यटन